चिसो भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य बालबालिका ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
चिसो भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य बालबालिका !
माघ २५, २०७५ शुक्रबार २०:४२:२३ | प्रताप बानियाँ
म्याग्दी – भर्खर दुध चुस्न छाडेका स–साना बालबालिका । उमेरले ३ वर्षदेखि ५ वर्ष मुनीका । भत्किनै लागेको विद्यालयको कक्षाकोठा थाम ठोकेर अड्याइएको छ । ढुङ्गा बिच्छ्याइएको भुइँ त्यसैमाथि केही काठ र साना म्याटको चकटी मात्र । पढ्ने सामग्री केही पनि छैन ।
पुस माघको ठिहिर्‍याउने चिसो ।
डिम्ब आधारभूत विद्यालय मात्र होइन म्याग्दीका अधिकांश विद्यालयहरुको हालत यस्तै रहेको छ । सदरमुकाम बेनीबजारदेखि २ घण्टाको पैदल दुरी ४५ मिनेटको यातायातमा पुग्न सकिने विद्यालयको अवस्था त यस्तो छ भने दुर्गम तथा अति विकट विद्यालयको अवस्था झन कस्तो होला ?
विद्यालयको विकासका साथै गुणस्तरीय शिक्षा र समयसापेक्ष शिक्षाका लागि सरोकारवालाहरुले समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।